အကူအညီ:လမ်းညွှန်ပြသခြင်း - MediaWiki
This page isatranslated version of the page Help:Navigation and the translation is 6% complete.
မှတ်ချက်- ဤစာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်သည့်အခါ၊ CC0 အောက်တွင် သင်၏ပံ့ပိုးကူညီမှုကို ထုတ်ပြန်ရန် သဘောတူပါသည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် Public Domain Help Pages ကိုကြည့်ပါ။
သင့်အား လမ်းညွှန်ကူညီနိုင်ရန်အတွက် MediaWiki ပေါ်ရှိ စာမျက်နှာတိုင်းတွင် အဓိက လမ်းညွှန်ချက်သုံးခုကို ရှိပါသည်။
sidebarသည် သင့်ကို ဝီကီတွင်ရှိသော အရေးကြီးသည့် စာမျက်နှာများ အထူးသဖြင့် လတ်တလော အပြောင်းအလဲများ သို့မဟုတ် ဖိုင်​တင်​ရန်​ သို့ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်စေရန် ခွင့်ပြုပါသည်။ မီဒီယာဝီကီတွင်သင်သည် Sidebar Options များကို အသုံးမပြုမီ ပထမဦးဆုံး စာရင်းသွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
၂ Page tabs
၃ User links
The ကိရိယာများ containsaselection of links which change depending on what type of page you are viewing.
"ဘယ်ကလင့်ခ်ထားလဲ" takes you toaspecial page that lists the pages on that wiki which containalink to the current page.
This is helpful when you are looking for pages of related information. The "ဘယ်ကလင့်ခ်ထားလဲ" information can also be useful when you are refactoring wiki pages and need to check whether links to this page are still relevant after changes in the current page.
The "ဆက်​စပ်သော​ အ​ပြောင်း​အ​လဲ​များ​" tool lists all recent changes in the pages linked to from the current page.
Recent changes to all relevant template pages are included in the resulting page list. The "အရေးမကြီးသော တည်းဖြတ်မှုများကို ဝှက်ရန်" option that can be set in the user preferences applies, among other things, to "ဆက်​စပ်သော​ အ​ပြောင်း​အ​လဲ​များ​".
"ဖိုင်​တင်​ရန်​" displaysaspecial page that allows logged-in users to upload images and other files to the wiki.
The "အထူး စာမျက်နှာများ" tool lists the MediaWiki special pages.
"ပြင်ဆင်ရန်" (may read "ရင်းမြစ်ကို ကြည့်ရန်" if anonymous editing is disabled, the page is in the MediaWiki: namespace, or the page is protected)
A list of all pages that you are watching. Pages can be added to this list by clicking "စောင့်ကြည့်ရန်" at the top of the page.
Retrieved from "https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Help:Navigation/my&oldid=4445718"